Posted by Tranquillus | Jul 19, 2018 | Tababarka internetka
Kharashka waxbarashada ama tababarka xirfadeed inta badan waa caqabad markaad tixgelinayso shahaadada si aad si fudud u hesho shaqo. Dad badan ayaan haysan macnehaga ah in lagu maalgeliyo tababarka farsamada, dad badanina weli kuwa aan garanayn sida loo maalgeliyo tababar xirfadeed. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, habab badan oo faa'iido leh oo lagu maalgaliyo qayb ama dhammaan tababarrada xirfadeed. Haya'daha dawlada ama aan ahayn, ayaa loo sameeyay si ay kuula socdaan dadaalkaaga. Halkan waxaa ku qoran macluumaad iyo talooyin si aad u hanato si aad si fudud u hesho kaalmada dhaqaale ee tababarka xirfadda.
Maxaad u raacdaa tababar xirfad leh?
Sababo dhowr ah waxay caddaynaysaa doorashada in ay qaataan tababar xirfadeed, ugu horreyntii in la helo shaqo u qalma si sahlan. Shirkad ama hay'ad dadweyne, la'aanta shahaadooyin xirfadeed oo gaara gaar ah ayaa noqon karta nidaam si loo hagaajiyo.
Inaadan lahayn tababar ku haboon baahida shirkadu waxay noqoneysaa mid jiid ah, iyada oo aan loo eegin awoodaada inaad la qabsatid oo aad ku cusbooneysiiso. Qaado tababar xirfadeed waxay kuu ogolaaneysaa inaad sare u qaaddo resumeygaaga oo aad dib u eegto ujeedooyinkaaga xirfadeed. Tababbar xirfadeed dhammaystiran waxaa lagu raaci karaa maadada habeenkii si waqti gaaban ama gudaha ah (shirkad) oo u ogolaanaya inuu helo xirfado cusub.
Waxaad sidoo kale raaci kartaa tababarka xirfadlaha ah si aad dib ugu noqotid maalinta, adigoo xasuusiya xasuustaada. Horumarka adduunka iyo tiknoolajiyadda ayaa laga yaabaa inuu u baahdo cusbooneysiin, gaar ahaan haddii qofku raaco waxbarashadiisa tobanaan sano ka hor. Aqoonta hadda jirta ayaa laga yaabaa inay ahaato mid aan taariikh ahayn, tababbarkuna wuxuu hagaajin doonaa waxqabadkiisa. Tababarka dib u celinta waxaa lagu talinayaa sanado kasta 5 si uu u hayo shaqaalaha sida ugu wanaagsan ee awoodiisa.
Ugu dambeyntii, tababarka xirfadlaha ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo celiyo ama dib ugu laabto aag kale. Tababbaridda goobta la beegsanayo waxay u oggolaan doontaa isbeddel xagga jihaynta shaqada. Hannaankani wuxuu noqon karaa mid adag oo waqti-badan, laakiin sidoo kale waa qancin marka tababarku uu guuleysto.
Waa maxay qiimaha la siinayaa tababarka xirfadda?
Si aan qarsoodi aheyn, ka qaybgalka tababarka wuxuu keenayaa qiimo dheeraad ah ee qofka shaqaalaha ah ama cilmi-baarista shaqada, shirkaddu waxay sidoo kale faa'iido u leedahay inay tababarto shaqaalaheeda. Ku saabsan shaqaalaha, tababar xirfadeed wuxuu sare u qaadayaa CV, wuxuu u oggolaadaa horumarinta shaqsiyadeed iyo xirfadeed. Waxay u ogolaaneysaa helitaanka shahaadada iyo horumarinta kartidooda si horumar joogta ah. Raac a tababar xirfadeed waa feejignaan ku wajahan fursadaha shaqo-helidda oo ka fiican oo mid ka mid ah la qiimeeyo, shaqo raadiyaha, wakiilada adeegga dadwaynaha, kala-qaybsanaan, dhakhtarka, maskax furnaan, iwm.
Maalgelinta tababarka xirfadeed: qaababka shaqo doonka ah.
Wixii a caawinta maalgelinta waxbarashada dadka waawayn, shaqo-raadsanaashu wuxuu qaadan karaa tababar xirfadeed si loo cusbooneysiiyo aqoontiisa ama inuu u bedelo goob kale. La taliyeyaasha Pôle Emploi waa caawimo weyn si aad u hesho a maalgelinta waxbarashada dadka waawayn iyo hagaha shaqo raadiyaha.
Dambe wuxuu sidoo kale qaadan karaa inuu helo kaalmo lacageed si macnahiisu uu yahay. waayo, maaliyadda tababarka xirfadda, gargaarka suurtagalka ah ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah waa tiro badan.
Sidaa darteed, haddii aad heshay saacado tababar ah oo ku saabsan Xisaabtaada Tababarka Shakhsi ahaaneed (CPF) muddada aad shaqeyneyso, waxaad ka faa'iideysan kartaa dhowr saacadood oo tababar ah oo bilaash ah. Waqtiga bilaashka ahi wuxuu qayb ahaan yareyn karaa kharashka tababarkaaga xirfadeed.
Ku noqoshada Tababarka Shaqada (AREF) ayaa sidoo kale maalgelin kara qayb ka mid ah tababarkaaga xirfadeed, oo ay ansixiyeen Pôle Emploi. Sidaa darteed, shaqo-helaha ayaa ka faa'iideysan doona inta lagu jiro tababarkiisa AREF oo ah mid la mid ah AER (Ku noqoshada Caawinaada Shaqada) oo bil walba la bixiyo.
Noocyo kale oo dhowr ah ayaa u ogolaanaya dadka shaqo doonka ah inay helaan maalgalinta tababarkooda xirfadeed. Waxaa ka mid ah kuwo kale Horudhac ah Tababarka Action qorista ee (dunta), Hawleed Diyaarinta Individual Employment (POEI) conventionnées Waxqabadka Tababarka (FTA), Aid Tababarka Qofka.
Guddiga Gobollada wuxuu bixiyaa kaalmo maaliyadeed shaqsiyadeed shaqsiyaadka si ay u raacaan tababarka xirfadlaha ah ee lagu diwaan geliyey shahaadada RNCP (Tilmaamaha Diiwaangelinta Shahaadooyinka). Koorsooyinka waxaa si buuxda u taageeraya Guddiga Gobalka ee xuduudaha saqafyada sida waafaqsan tababbarka. Si aad uga faa'iidaysato gargaarkan, waa inaad ka diiwaan gashan tahay Pôle Emploi kuna noolow gobolka ku habboon.
Shaqaalaha curyaanka ah waxay ka faa'iideystaan ​​Agefiph iyo qalab dhaqaale oo kala duwan waxaa bixiya hoolalka magaalada, CAF, goleha waaxeed, oo kiis ku salaysan kiis.
Maalgelinta “tababarka xirfadeed” ee shaqaalaha
Xaaladdu way kala duwan tahay iyada oo ku xidhan haddii mid ka mid ah shaqaale joogto ah, shaqaale joogto ah ama shaqaale ku meel gaar ah. ah maalgelinta "tababar xirfadeed" shaqaalaha joogtada ah waa suurtagal haddii qofku ugu yaraan u shaqeeyay 24 bilood ama 36 bilood shirkadaha farsamada gacanta oo ay ka shaqeeyaan wax ka yar 10 shaqaale ah. Maalgelinta tababarkaagu wuxuu noqon karaa wadar haddii qorshe tababar laga qorsheeyo shirkaddaada gudaheeda. Sidaas darteed shaqaaluhu kama walwalayo maalgelinta. Qofka shaqaalaha ah ee ku jira qandaraaska muddada-go'an wuxuu ka faa'iideysan karaa tababar xirfadeed xaaladaha qaarkood.
Waa in marka hore ay ka shaqeeyeen ugu yaraan bilood 24 5 sannadihii la soo dhaafay, waa in sidoo kale la shaqeeya inta lagu guda jiro 4 bilood ee sanadka socda iyo sanadka soo socda dhamaadka CSD ah. Shaqaalaha ku-meel-gaarka ah, Sanduuqa Caymiska Shaqada ee Ku-Meel-Gaarka Shaqada ayaa u oggolaanaya shirkadaha inay maaliyad ahaan ka caawiyaan shaqaalahooda ku-meel-gaarka ah inay qaataan tababar xirfadeed.
Xaaladaha oo idil, shaqaaluhu wuxuu heli doonaa kaalmo maaliyadeed oo uu tababarkiisa ku qaato qaabka Xisaabaadka Tababarka Shakhsi ahaaneed (CPF), Qorshaha Tababarka Shirkadda (PFE), Fasax Waxbarasho Shakhsiyeed (CIF) ), fasaxa tababarka. Haddii qofka shaqaalaha ah ama dhexdhexaadiyuhu leeyahay tiro saacado ah oo lagu xisaabtamo koontadiisa CPF, wuxuu ka faa'iideysan karaa a maalgelinta "tababar xirfadeed" oo uu bixiyo shaqaaleeyaha iyo OPCA ee 50% ugu badnaan.
Tababarka wuxuu qaadan karaa waqtiga shaqada iyo ay dhacdo in this, waa in la helo ogolaansho maalmaha 60 loo shaqeeyaha uu ka hor tababarka hoos bilood iyo maalmo 6 120 haddii tababarka hayo in ka badan bilood 6. Loo shaqeeyeha wuxuu leeyahay 30 maalmood in ay ka jawaabaan iyo haddii aamusnaan doonana, codsiga la aqbalo by default. Haddii tababarku ka dhaco wakhtiyada shaqada ka baxsan, heshiiska shaqada looma baahna.
Iyadoo qayb ka ah EFP, shirkaddu waxay waajib ku tahay inay hubiso tababarka joogtada ah ee shaqaalaheeda meel ay joogaan waana in ay xaqiijiyaan horumarintooda shirkadda. Sidaas awgeed loo-shaqeeyaha waxaa laga rabaa inuu tababar ku bixiyo shaqaalahaan. Si kastaba ha noqotee, Qorshaha Tababarka ma aha mid khasab ah oo waa codsi shirkadda, loo shaqeeyaha, bulshada ama maamulka. Shaqaalaha hoos yimaada PFE waxay mushahar ku qaataan dhammaan waqtiga tababarka iyo kharashyada dheeraadka ah ee tababarka (hoyga, safarka, cuntada, iwm.) Waa masuuliyadda loo shaqeeyaha.
CIF waxaa dhanka kale ka tago qofka shaqaalaha ah in ay ka soo goobta ka maqnaa muddo la cayimay in ay qaataan tababar xirfadeed iyo horumarinta xirfadaha ama mar kale waxbarasho. CIF waa ka duwan tahay PFE waa ujeeddada qofka shaqaalaha ah waxaana la siiyaa ogolaashaha loo shaqeeyaha. Shaqaaluhu xajisto mushaar dhan muddo tababar xitaa haddii ay ku saabsan tahay beer kala duwan ee hawlaha ka in uu shirkadda uu. Tababbarka hoos timaadda CIF wuxuu noqon karaa mid waqti-dhiman ama wakhti buuxa ah, joogto ah ama aan joogto ahayn.
Maalgelinta tababarkiisa xirfadeed sida shaqaale rayid ah
Sida shaqaalaha gaarka loo leeyahay, shaqaalaha waxaa laga yaabaa in loo tababaro shaqaalihiisa ama gobolka. Shaqaalaha ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​Fasaxa Tababarka Xirfadaha (CFP) haddii ay ku shaqeynayeen sanado 3 ah ee maamulka dadweynaha. CFP-da kama badnaan karto saddex sano ka badan xirfad, waxaa la qaadan karaa hal mar ama waxay ku faaftaa dhowr tababar oo xirfadeed.
Joogitaanka saraakiisha tababarka ayaa la kormeeri doonaa bil kasta si uu u ansixiyo bixinta gunnadiisa. Gunnooyinkan waxay ku dhigan yihiin 85% mushaharka guud ee lagu daray, xaaladaha qaarkood, kharashyada guriga. Sarkaalka wuxuu kaloo ka faa'iideysan karaa a maalgelinta tababarka xirfadeed iyada oo qayb ka ah isbedelka jagada ee isku mid ah (A, B ama C). Xaaladdan, wuxuu ka faa'iideystaa fasaxa tababarka ee muddadiisa aan ka badnaan karin bilaha 6.
READ Baro inaad ku madadaasho SKILLEOS, e-learning madal
Shaqaalaha dowladda ayaa sidoo kale ka faa'iideysta amaahda sanadlaha ah ee saacadaha tababarka xirfadeed ama Koontada Tababbarka Shakhsiyeed (CPF). Tani caawinta maalgelinta waxbarashada dadka waawayn waxaa laga helaa codsiga rasmiga ah ee ujeedada ah in la raaco koorasyo ​​gaar ah oo u oggolaanaya horumarinta xirfadaha lagama maarmaanka ah, si loo helo shahaadada, magac ama shahaadada aqoonta xirfadeed.
Maalgelinta tababarka xirfadeed ee iskii u shaqeysta
Qofka iskaa u shaqeysta waa kan ku jira koontiisa ama maamule ganacsi. Waxay sidoo kale raaci karaan tababarka xirfadeed waxayna ka faa'iideysan karaan kaalmada maaliyadeed iyada oo ay ugu mahadcelinayaan AGEFICE, Ururka Maareynta Maalgelinta Tababarka Hoggaamiyeyaasha Ganacsi. Si aad uga faa'iideysato kaalmadan lacageed, waa inaad marka hore ka shaqeysaa dhinacyada ganacsiga, warshadaha ama adeegyada, waa inaad sidoo kale ka diiwaangashan tahay URSSAF iyadoo la raacayo lambarka NAF. Shaqaalaha iskood u shaqeysta ee xaq u leh maalgalinta waxay ka faa'iideysan doonaan khidmadda khidmadda tababarka oo ah 2 euro sanadkii.
Dhakhaatiirta dimuqraadiga ah, FAF-PM ama Caymiska Caymiska Waxbarashada ee Xirfad Caafimaadku waxay u baahan tahay tabaruc dhakhtarrada ah 0,15% qiyaasta ciqaabta sannadlaha ah ee arrimaha bulshada. Waad ku mahadsan tahay lacagtan, dhakhaatiirtu waxay qaadan karaan tababar kooxeed oo leh ururada waxbarashada dheeraadka ah (CME). FAF-PM ayaa sidoo kale ka caawiya dhaqtarka raba in uu dhigto tababar shakhsiyeed, illaa 420 euros sanadkiiba iyo dhakhtarka. Dambe wuxuu markaa kadib raaci karaa aqoon isweydaarsiyad ama wuxuu diyaariyaa DU, kartidiisa.
Xirfadaha kale ee deeqsinimada leh, waxay ku tiirsan yihiin Sanduuqa Xirfadleyda Xirfadleyda Xorta ah (FIF-PL). Waa inaad ka diiwaangashan tahay URSAFF oo aad leedahay nambarka NAF si aad uga faa'iideysato kaalmadan lacageed. Sida laga soo xigtay Dib-u-habaynta tababarka xirfadaha, guddi ayaa mas'uul ka ah u qoondeynta ama aaney ku siin qalabyada tababarka xirfadaha ee ku jira FIF-PL. xirfadlaha waa inuu soo gudbiyaa arjiga bogga shabakadda ee deeqda, oo ay la socoto xigasho loogu talagalay tababarka la doonayo. Maalgelinta tababarku wuxuu ku salaysan yahay kiis-kiis.
Maalgelinta tababarka farsamooyinka ee kala-guurka
Farshaxanka kala-sooca ama farsamoyaqaanku wuxuu xaq u leeyahay Fasax Tababar Shakhsiyeed (CIF) wuxuuna ka faa'iideysan karaa a caawimo ah inuu maal-galiyo tababarkiisa. Maalgelinta tababarka waxay noqon doontaa qeyb ama wadar iyadoo kuxiran waqtiga la shaqeeyay. Caymiska Tababarka Waxqabadka (AFDAS) wuxuu ka caawin doonaa qofka gogol-dhaafka ah inuu helo maalgelin ama uu daboolo dhammaan kharashaadka tababarka haddii mushaharka is-dhaafku ka yar yahay ama u dhigmo 150% mushaharka ugu yar. Haddii ay dhacdo in qofka kumeelgaarka ah lagu tababaro CIF, wuxuu yeelan doonaa xaalad sii wadida tababbarka xirfadda oo waxaa bixin doona AFDAS.
Maalgelinta tababarkaaga xirfadeed, hage wax ku ool ah Agoosto 16th, 2018Tranquillus
horeAdeegyada ugu fiican ee internetka loogu diro faylasha waaweyn oo aan diiwaangelin.
socdaNoqo qayb raadinta Google